Ogbunigwe gbawara na Kano ebguona mmadụ 12
Ka a ka na-ekwu maka mgbọ ogbunigwe gburu mmadụ 15 na Potiskum, na Steeti Yobe, ogbunigwe ọzọ gbawara na ọdụ ụgbọala taa bụ Tuzdee abalị 24 nke ọnwa Febụwarị na Kano. Mmadụ abụọ ndị agha isi ekwe ọnwụ buru ogbunigwe gwajuo n’ụgbọala, nyara ya gawa n’ọdụ ụgbọala. Ha gbawara ma ogbunigwe ha, ma ụgbọala ha na Kano. Mmadụ abụọ ndị agha ọkwụ ụdọ ahụ gburu onwe ha, ma gbukwe mmadụ iri ndị ọzọ na-agara onwe ha.
Onye Kọmishọna ndị uwe ojii na Kano, Ibrahim Idris, gwara ndị nta akụkọ na n’ezie, ogbunigwe ahụ gbawara na Kano gburu mmadụ 12. A mabeghị mmadụ ole merụrụ ahụ. Ibrahim kwuru na ndị omekome ahụ jiri ụgbọala atọ were kpa mkpamkpa ahụ. A na-eche na ndị agha iyi egwu ahụ siri obodo ọzọ bata na Kano maka igbu ndị mmadụ.